Musharaxiinta oo 10 qodob kasoo saaray tallaabadiii uu qaaday Farmaajo (Aqriso) - Caasimada Online
Home Warar Musharaxiinta oo 10 qodob kasoo saaray tallaabadiii uu qaaday Farmaajo (Aqriso)
Musharaxiinta oo 10 qodob kasoo saaray tallaabadiii uu qaaday Farmaajo (Aqriso)
Muqdisho ( Caasimada Online) – War kasoo baxay Golaha Midowga Musharixiinta ayaa looga hadlay Xaaladda Soomaaliya gaar ahaan go’aanka Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku sheegay in uu hakiyay awoodda Ra’iisul Wasaaraha XFS.
Golaha Midowga Musharixiinta ayaa tallaabadaas ku tilmaamay mid kahor imaaneysa Dastuurka Dalka isla markaana xad gudub ku ah howlaha shaqo ee Wasiirka Koowaad ee Xukuumadda Federaalka Maxamed Xuseen Rooble.
“Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu dalka u horseeday Xasarad siyaasadeed & Qalalaase amni oo halis gelin kara Xasiloonida Soomaaliya, qoraalka uu soo saaray waxa uu muujinayaa in uusan ka tanaasulin damicii ahaa muddo kororsiga” ayaa lagu yiri Xaanshida kasoo baxday Golaha Midowga Musharixiinta.
Golaha ayaa si jeediyay in beesha Caalamku ay u aqoonsato Farmaajo iyo lataliyaashiisa “Qaswadayaal” waxa ayna ka dalbadeen shacabka Soomaaliyeed in la garan istaago Ra’isul wasaaraha.
Midowga Musharixiinta ayaa sheegay inay go’aankii kasoo baxay Farmaajo u arkaan:
3-In Madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday uu si joogta ah u jebiyo heshiiskii la gaaray 27ka Maajo, wiiqana awoodda Raysal- wasaaraha, isla markaana awood gaar ah siiyo shabakado qarsoon oo barbar socda hawlaha Raysal-wasaaraha, kuwaasoo loo gorsheeyey in ay Madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday u boobaan doorashooyinka.
Midowga Musharixiinta ayaa waxaa ay sidoo kale soo saareen todobo qodob oo badankood ay ku muujinayaan inay garab taagan yihiin Ra’iisul Wasaaraha, kuwaas oo kala ah.
1- In Raysal-wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta uu dardargeliyo hawlaha doorashooyinka, iyo caddaalad u helidda kiiska lkraan Tahliil.
Halkaan hoose ka akhriso war murtiyeedka oo dhameytiran